Iska Horimaad Keenay Dhimasho Oo Dhex-maray Maleeshiyooyin Ka Soo Kala Jeeda Gobolada Awdal iyo Gebilay | Somaliland.Org
February 25, 2009	Hargaysa (Somalioland.org)- Iska horimaad sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa saaka ka dhacay Boodhka Galigalool oo ku yaala meel u dhaxaysa deegaanada Geblilay iyo Baki.
Iska horimaadkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa la sheegay in ay ku dhinteen in ka badan laba ruux, ilaa siddeed qof oo kalena ay dhaawacyo ka soo gaadheen .
Deegaanadan oo ah dhul beereed in muddo ah ay ku muransanaayeen laba beelood oo ka soo kala jeeda Gobolada Gabilay iyo Awdal, ayaa hore waxa xukuumadu ay hore u gaysay cutubyo ka mid ah ciidamada si ay u sugaan amaanka. Waxaana la sheegay in haatan xaalada amaan ee deegaankaasi cakirantahay.
Muranka u dhexeeya beelaha halkaasi wada dega ayaa wuxuu sii xoogaystay xiligii hawlaha diwaangelintu ay ka bilawdeen gobolka Awdal iyo Awdal. Isla markaana deegaankaasi ayaanay wax diwaangelin ahi ka dhicin murankan awgii.